Sababta oo ah isbeddelada istaraatiijiyadeena deeqsiinta ah, waxaan qorrax ka dhicineynaa aagaggan barnaamijyada: Waxbarashada, Gobolka & Bulshooyinka, Webiga Mississippi, iyo Koonfur-bari Aasiya. Taasi micnaheedu waa inaanan aqbalin codsiyada deeqda aagaggaas.
Waxaa naga go'an inaan masuuliyad iska saarno hoos u dhigida deeqdeena si hab daahsoon oo taageero leh. Macluumaad dheeri ah, ka eeg Kheyraadka Gudbinta bogga.
A barnaamij cusub diiradda lagu saaray dhismaha sinnaan iyo jaaliyad loo wada dhan yahay ee gobolka Minnesota ayaa beddeli doonta barnaamijka waxbarashadda, kaas oo ardayda reer Minnesota ugu diyaariyey guul iyaga oo ku mashquulinaya qoysaska iyo maalgashadayaasha barayaasha.
Hoos ka daawo News News & Fikradaha
Eeg deeqaha waxbarasho
A barnaamij cusub diiradda lagu saaray dhisidda jaaliyad loo wada siman yahay oo loo wada dhan yahay ee gobolka Minnesota ayaa bedeli doonta barnaamijka Gobolka & Jaaliyadaha, kaas oo abuuray bulshooyin lagu noolaan karo iyo fursado la ballaariyey oo dadka oo dhami ku najaxaan.
Eeg Degmooyinka & Bulshooyinka Wararka & Fikradaha
Eeg Deeqaha Gobolka & Jaaliyadaha
27 sano oo maalgelin ah kadib, McKnight ayaa deeqi doona qorrax dhaca Barnaamijkeena Mississippi River sanadka 2021. Waxaan sharfineynaa deeq bixiyayaasheena iyo horumarkooda ku aadan soo celinta tayada biyaha iyo adkeysiga biyo-mareenkan weyn.
Fiiri Mississippi River News & Fikradaha
Eeg Deeqaha Mississippi ee Wabiga
35 sano oo maalgelin ah kadib, McKnight wuxuu soo gabagabeyn doonaa barnaamijkayaga Koonfur-bari Aasi marka la gaaro 2021. Waxaan xushmeyneynaa deeq-bixiyeyaashayada iyo horumarkooda ku aadan taageeridda habnololo waara iyo xuquuqda Kheyraadka dabiiciga ah.
Fiiri Koofurta Aasiya News & Fikradaha